YEYINTNGE(CANADA): Monday, April 22
ဒီနေ့ နေ့လည်ခင်း တောင်ဥက္ကလာဖက်ရောက်တုန်း ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခု မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဖခင်လုပ်သူ ဆိုက္ကားဆရာက ခရီးသည်စောင့်မျှော်နေရှာရင်း သူ့သမီးလေးကို သူတတ်သလောက် စာသင်ပေးနေပုံလေးပါ။
ချစ်ချစ်တောက်ပူပြင်းတဲ့နွေနေပူပူအောက်က သားအဖနှစ်ယောက် အချီအချ စာသင်၊ စာအံသံလေးတွေဟာ အဲဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ မင်္ဂလာရှိစွာပျံ့လွင့်လို့နေပါတယ်။ ကျွန်တော် သူတို့နားမှာ နာရီဝက်လောက်ကြာအောင် ရှိနေတာတောင် ဖခင်ရဲ့ စာသင်ချိန်က မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ သမီးလေးခမျာလည်း ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ မငြီးမငြူ သင်နေရှာပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူက ချစ်သမီးလေးအိုက်နေမှာစိုးရှာလို့ ထင်ရဲ့။ စာသင်ပေးရင်း ယပ်တောင်လေးပါ ခပ်ပေးနေရှာတယ်ဗျာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ပေးကံကြောင့် မျက်နှာမွဲရခဲ့ရှာပေမယ့် ကိုယ့်သားသမီးခေတ်ကျရင် မျက်နှာမငယ်စေရဘူးဟဲ့ ဆိုတဲ့အားမာန်နဲ့ မိမိတတ်စွမ်းသမျှ ပညာရေးအားပေးနေရှာတဲ့ အဲဒီဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ သမီးလေးရဲ့ ဇွဲ၊ လုံ့လတို့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီလိုပညာရေးကို အလေးပေး၊ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းသိသူ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ များများလိုအပ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/22/20130အကြံပြုခြင်း
လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲ မှု တွင်တာဝန်ရှိသူများအား ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၃ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၂၃ ရက်)
လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲ မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အစီအရင်ခံစာ
အရ အောက်ဖော်ပြပါ တာဝန်ရှိသူများကို ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်သည်။
(၁) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(၂) ရဲမှူးကြီး စန်းယု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(၃) ဒုရဲမှူးကြီး သူရ သွင်ကိုကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/22/20132အကြံပြုခြင်း
HRW ရဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ မိတ္ထီလာ မှတ်တမ်း အပေါ် ဦးရဲထွဋ် မှတ်ချက်ပေး
Tsarnaev ညီအစ်ကို Boston အပြင် အခြားတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပုံရ
ဘော်စတွန်ဗုံးဖောက်ခွဲမှု သံသယရှိသူ Tsarnaev ညီအစ်ကို။ဘော်စတွန်ဗုံးဖောက်ခွဲမှု သံသယရှိသူ Tsarnaev ညီအစ်ကို။
ကိုရဲမင်းဦးကို သာကေတ တရားရုံးက ထပ်မံတရားစွဲဆို
ကျောင်းသမဂ္ဂများ ပြန်လည်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ကိုရဲမင်းဦးကို သာကေတ တရားရုံးက ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သူ့ကို ပုဒ်မ ၁၅၃ ဖြင့် ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တာပါ။နေ့လည် ၁၁ နာရီမှာတော့ ကိုရဲမင်းဦးကို ယခင်ဆွဲဆိုထားသည့် ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် ဗဟန်းတရားရုံးမှာ ကြားနာ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းကခိုင်အောင်ကျော် ( နယူးယောက် )ကိုအလုပ်တခုပေး
U Khaing Aung Kyaw's photo.
နိုင်ငံတကာရောက် ရခိုင်လူမျိုးများက ကိုရဲမင်းဦးကို လွှတ်ပေးဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးနေစဉ်
အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း-လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဋ္ဌါန ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ-ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး-နယူးယောက်သံအမတ် ဦးကျော်တင့်တို့ က မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့-၂၂-၄-၂၀၁၃- နေ့ လည်-၁-နာရီခန့် မှာ ကုလသမ္မဂ ရုံးချုပ်ရှေ့ -United Palaza -အဆောက်အဦးမှာ တွေ့ ဆုံပွဲလုပ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒီလိုတွေ့ ဆုံပွဲ ပြုလုပ်ရာမှာ မြန်မာအစိုးရ၀န်ကြီးများကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေက အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တစောင်ကို ထုတ်ပြန်ပေးပါတယ် ။
ကျွန်တော်က နိုင်ငံတကာရောက် ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းကို အခန်းအနားအပြီးမှာ သူကတဆင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆီ ပေးဖတ်စေဖို့မေတ္တာရပ်ခံပြီး ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီစာမှာ အဓိကဖေါ်ပြထားတာကတော့ စီးပွါးရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုရဲမင်းဦးကို မတရားဖမ်းဆီးတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ ၊ ၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကို တိကျထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ ၉၆၉-ကို ၀န်းရံပေးဖို့၊ OIC- ကို လုံးဝလက်မခံဖို့ နဲ့ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီကုလားလူမျိုးတွေအတွက် အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်ပေးတာကို မပြုလုပ်ဖို့တင်ပြတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်က အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပြီး ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့လက်ဆွဲနုတ်ဆက် စကားပြောပြီးတဲ့ အခါ သူနဲ့ ကျွန်တော် စကားပြောကြတယ် ။
“ ဒီစာက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို အောက်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေက အိတ်ဖွင့်ပေးတဲ့ စာပါ ၊ ကျေးဇူးပြုလို့ပေးပေးပါ ခင်ဗျား “
“ ခင်ဗျားက ကျနော့်ကို အလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျားကိုလဲ ကျနော်က အလုပ်တခုပေးရမယ် “
“ ဘာအလုပ်လဲ ဗျာ “
“ ခင်ဗျားက ဘင်္ဂလီတွေကို ထောက်ခံနေတဲ့လော်ဘီတွေ လုပ်နေတဲ့လူတွေကို ပြန်လည်ပြီး တုန့် ပြန်ရေးပေးပါ ၊ ကျနော်တို့ လဲ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေပါဘဲဗျာ “
“ ဟုတ်ကဲ့ - ကျနော်လဲ ရေးနေပါတယ် “
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/22/2013 1 အကြံပြုခြင်း
Chiheb Esseghaier, 30, and Raed Jaser, 35,တို့ကိုမွန်ထရီရယ်နှင့်တိုရန်တိုမြို့များတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း
The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ကထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သည်။၄င်းတို့၂ဦးသည်ကနေဒါ
Assistant Commissioner James Malizia:
source;today Cananda news
ကျွန်တော်ကမေးလို့ ဝန်ကြီးဦးခင်ရီက အခုလို ဖြေတာ
၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေကို တလုံးတပါဒမျှ ပြင်စရာ မလို-
အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း-လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဋ္ဌါန ၀န်ကြီးဦးခင်ရီ-မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ဦးကျော်တင့်နဲ့ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့ က-၂၂-၄-၂၀၁၃- နေ့ မှာ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒီတွေ့ ဆုံပွဲမှာ ကျွန်တော်က ခုလို စတင်မိတ်ဆက် စကားပြောခဲ့ ပါတယ် ။
လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ်-၂၀-လောက်က ကျနော်တို့ ဟာ ဆန္ဒပြခဲ့ သူတွေဖြစ်တယ် ။ အခုလဲ အောက်မှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့သူတွေဟာ ကျနော်တို့အဖွဲ့ တွေဖြစ်တယ် ။ လွန်ခဲ့ တဲ့ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ကျနော်တို့ ဆန္ဒပြခဲ့ တာတွေဟာ အခုလိုမျက်နာချင်းဆိုင်ပြီး စကားပြောချင်လို့ ဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမဲ့စစ်အစိုးရဟာ ကျနော်တို့ နဲ့စကားပြောဖို့ ရင်မဆိုင်ခဲ့ ဘူး ။ အခုတော့ မြန်မာအစိုးရက ၀န်ကြီးတွေက နယူးယောက်မြို့ မှာနေတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို တွေ့ ဆုံစကားပြောဖို့ ဖိတ်တဲ့ အတွက် ကျနော်ခုလို လာရောက်စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ် ။ ပြောခွင့်ပေးတဲ့ အတွက်လဲ ၀န်ကြီးတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကြားပြီး မေးမြန်းတင်ပြ ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒါကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဋ္ဌါန၀န်ကြီး ဦးခင်ရီနဲ့ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ် ။ သူတို့ တွေရဲ့အဖြေက ဒီလိုဖြစ်ပါတယ် ။
၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြောင်းလဲရန် ရှိ/မရှိ ။
ဒါကအတိုချုပ် ဖြေပါတယ် ။ ဒါကျတော့ တိုလွန်းအားကြီးတယ်ဗျ ၊ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရန် မရှိဆိုတာကို ရမ်းပြောတာ မဟုတ်ဘူး၊ နည်းနည်းလေးနောက်ကြောင်းကို ပြန်လှန်ရမယ်ဆိုရင် -၈၂-ခုနှစ် ဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အကြောင်း အစကအသိပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ -၁၈၂၄-ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီမတိုင်ခင် သမိုင်းကိစ္စ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်တရားဝင် နိုင်ငံခြားသား မရှိဘူးဆိုတာ သိရပါတယ် ။
၁၈၂၄-ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်ပွဲ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ဒေသ ကျနော်တို့ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက် ရောက်ခဲ့ တယ် ။ အဲဒီကနေပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသား သူပြောတဲ့ဘင်္ဂလီတွေအကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေချခွင့် နေထိုင်ခွင့် စရခဲ့ တယ် ။ ဘယ်လောက်ထိ ရသွားသလဲဆိုတော့ လွပ်လွပ်ရေးရတဲ့-၁၉၄၈-ခုနှစ်အထိပေါ့၊ နှစ်ပေါင်းတရာကျော်လောက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခြေချလို့ ရခဲ့ တယ် ။ အဲဒီတော့ -၁၉၄၈-ခုနှစ် လွပ်လွပ်ရေးရလာတော့ တက်လာတဲ့ အစိုးရက ဒို့ နိုင်ငံထဲမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ များနေပြီဆိုပြီး စနစ်တကျ စာရင်းဖြစ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ လိုတယ်-ဥပမာတခုပြမယ်ဆိုရင်-၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေနဲ့-၁၉၄၈-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ရင် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိလာတယ် ။ လွပ်လွပ်ရေးရပြီးပြီးချင်း နိုင်ငံခြားသားများများ လာလို့အဲဒီဥပဒေမှာလဲ အားနည်းချက်လေးတွေ ရှိတယ်၊ ဥပမာပြောလို့ ရှိရင် ဗြိတိသျှအင်ပါယာမှာ ဘယ်နေရာဘဲဖြစ်ဖြစ် နေခဲ့ ဖူးတယ်ဆိုရင် -နေခဲ့ ဖူးတဲ့လူတယောက် အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ( ၈ ) -နှစ်လောက် နေခဲ့့ရင် နိုင်ငံသားအဖြစ် ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး ( Close )-ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ပါတယ် ။
အဲဒီတော့ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းဘဲ ဗြိတိသျှအင်ပါယာ ဆိုတော့ နေမ၀င်အင်ပါယာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နေရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာမှာဘဲ ကျနော်တို့ နဲ့သွေးစပ်သည်ဖြစ်စေ မစပ်သည်ဖြစ်စေ ဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ ရှိတယ်-ပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့- အဲဒီလိုအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒီဥပဒေတွေကို ပြန်ပြင်ဖို့ စဉ်းစားကြတယ် ။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ -၁၉၆၂-ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်တယ်၊ ၈၂-ခုနှစ် ဥပဒေပေါ်လာတယ် ၊ ၈၂-ခုနှစ် ဥပဒေရဲ့ အခြေခံကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အတွက် ကမ္ဘာမှာ မြေကိုမူတည်တဲ့နိုင်ငံရှိတယ်၊ သွေးကိုမူတည်တဲ့ဥပဒေရှိတယ် ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ သွေးကိုမူတည်တယ် ။ ဘယ်နေရာရာမှာဘဲ မွေးမွေး ကိုယ့်နိုင်ငံသား သွေးမစပ်ရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မရှိဘူး ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတင်မဟုတ်ဘူး ။ ကမ္ဘာမှာဒီလို နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ် ။ -၈၂-ခုနှစ် ပေါ်လာတော့( National Security နဲ့National Interest ) အနေနဲ့ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့တည်နေရာနဲ့့ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းဘဲနော်- အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့ ကြားထဲမှာရှိတယ်- ကိုယ့်ထက်--၃-ဆလောက်ငယ်ပြီးတော့-၄-ဆလောက် လူဦးရေများတဲ့နိုင်ငံကြားထဲမှာ ရှိတယ်- အဲဒီတော့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွါးနဲ့နိုင်ငံတော်လြုံခုံရေးကိစ္စကိုဘဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်- အဲဒီတော့ -၈၂-ခုနှစ် ဥပဒေဟာ ဒီအချက်တွေကို စဉ်းစားပြီးတော့-၆-နှစ်လောက် အချိန်ယူပြီးတော့ တိုင်း နှင့် ပြည်နယ်အနှံ့ကို ဆင်းပြီးတော့ လူတန်းစားအမျိုးမျိုး တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးအကြံယူပြီးမှ ပြုခဲ့ တဲ့ ဥပဒေတရပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျနော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်- အဲဒီတော့ အင်မတန်ခိုင်ခိုင်ခန့် ခန့်ရှိပါတယ်- အခုအစိုးရလက်ထက် ရခိုင်ဖက်မှာ မေလမှာတခါပေါ်တယ်- အောက်တိုဘာလမှာ တခါပေါ်တယ်- ဒီလူမျိုးစုနှစ်ခုအကြား ပြသနာပေါ်တဲ့ အခါကျတော့ ဥပဒေနဲ့ ပါတ်သက်လို့လွှတ်တော်မှာဘဲ လွှတ်တော်အမတ်တဦးက တင်ပြပါတယ်-အဲဒီတော့ ကျနော်တို့လွှတ်တော်အမတ်-၈-ဦးလောက်ထင်ပါတယ်- ဆွေးနွေးကြတယ်- အပြန်အလှန်ပေါ့- ကျနော်က သက်သေအနေနဲ့ထိုင်နေရပါတယ်- အဲဒီဥပဒေကို ဖတ်ကြတယ်- အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့- နောက်ဆုံးမှာ ဒီဥပဒေသည် ခုနကပြောသလို -၆-နှစ်ခွဲလောက်အချိန်ယူခဲ့ တာရယ် -National Security – National Interest -ကိုလဲ အလေးထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတော့ လက်ရှိအခြေအနေအရ တပုဒ်ချင်း တလုံးချင်းထဲမှာပင် ပြင်ဖို့ မလိုအပ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဆုံးဖြတ်တယ်- ပြည်သူ့ အသံ -အဲ- လွှတ်တော်အသံပေါ့- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာ ပြည်သူကရွေးထားတာဘဲ- ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က ဒီဥပဒေကို ပြင်ဆင်စရာမလိုလို့မှတ်ချက်ပြုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ ဒီဥပဒေကို မှတ်တမ်းးတင်ထားခဲ့ ပါတယ်- အဲဒီတော့ ကျနော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကို ပြောင်းလဲရန် မရှိဘူးလို့ပြောတာ တိုသွားမှာစိုးလို့ - ကျနော်ကပြောင်းလဲရန် မရှိပါဘူး-လောလောဆယ် ဒီဥပဒေကို ပြောင်းလဲရန် မရှိပါဘူး-သိပ်ကိုတိုသွားမှာစိုးလို့ ပါ ။
နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ ခိုးဝင်သူကို ဘယ်လို နယ်နှင်ဒဏ်ပေးမှာလဲ-
လ၀က ဥပဒေမှာတော့ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခိုးဝင်တာပေါ့ - ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်တာပေါ့ -အဲဒီလိုဆိုရင် အရေးယူရမှာပေါ့- ငွေဒဏ်လဲရှိပါတယ် -ထောင်ဒဏ်လဲရှိပါတယ် -၁၃-( က ) ကြီးက ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးတာလေးတွေ ရှိပါတယ် -ဒါလဲ လာရင်း သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်ပို့ တဲ့ဥပဒေရှိပါတယ် ။ အဆင့်ဆင့် ရှိပါတယ် - ဥပဒေ တချို့ အနေနဲ့ - Human Rights-Childs Rights တွေ ရှိပါတယ် ။ -၈၂-ခုနှစ် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားမဖြစ်တဲ့( Stateless-နိုင်ငံမဲ့) ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် စဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးရင် လ၀က-ဥပဒေအရ ရှိပါတယ် ။
လူမျိုး-၁၃၅-မျိုး ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား ။
၁၃၅-မျိုးရှိပါတယ် ဆိုတာ ကျနော်တော့ သိပါတယ် ။ ကျန်နေတဲ့လူတွေတော့ မသိဘူး ၊ အထူးသဖြင့် စောစောက ကျနော်ပြောသလို သန်ကောင်စာရင်းကောက်တာ -ရ၃-ခုနှစ်စာရင်းမှာ စာရင်းကောက်တယ်- ကောက်ပြီးတဲ့ အခါ နိုင်ငံတော်မှာ လူဦးရေစာရင်းကို တရားဝင်သတင်းစာမှာ ထုတ်ပြန်တယ် - ဂေဇက်မှာ ထုတ်ပြီးတော့ မှတ်တမ်းတင်တယ် -ရ၃-ခုနှစ် -၈၃-ခုနှစ် သန်ကောင်စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးစု -၁၃၅-မျိုးရှိပါတယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အလျှောက် အားလုံးသိဖို့ လိုအပ်မယ်လို့မှတ်ယူပါတယ် ။
မီဒီယာတွေကို ထိမ်းချုပ်ကန့် သတ်ဖို့အစီအစဉ် ရှိပါသလား ၊
ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးပြောသွားသလိုပါဘဲ -ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်တာပါဘဲဗျ - နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ပြောသလိုပေါ့- ရိုဟင်ဂျာမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ် - ဒါလဲ ကျနော်တို့အရိုင်းပြောတာ မဟုတ်ဘူး- ခုနက ဗြိတိသျှလက်ထက်မှာရှိတဲ့လူမျိုး-၁၃၅-မျိုးရှိတဲ့စာရင်းအရ -၈၃-ခုနှစ် တရားဝင်နိုင်ငံတော် ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ အဲဒီထဲမှာ လူမျိုးတမျိုးအနေနဲ့မပါဘူး -မယုံရင်ဖတ်ကြည့်ကြပေါ့- မပါပါဘူး-မပါရင် မပါလို့ ပြောတာ-ပါရင်ပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့- ကျနော်က မပါလို့မပါဘူးပြောတာ ဒီလိုဆိုလိုတာပါ- အဲဒီဟာကို မီဒီယာက သုံးတယ်ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ မသုံးနဲ့ လို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် သုံးနေတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရတော့မှာပေါ့ -၊။။။။။
ပဉ္ဖမ မေးခွန်း ------။။။။။။။။
ကင်တာနား ကို လက်မခံဖို့ကိစ္စ
ကင်တာနားကျတော့ ဒါကတော့ ရေရှည်ရေမြင့် ကြာရှည်ကြာမြင့် စဉ်းစားရမှာတွေ ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ဟာတွေ ဖြစ်ပါတယ် - ကျနော်တယောက်ထဲနဲ့ပြောနေလို့ကိစ္စ မဖြစ်သေးပါဘူး- ဒီလောက်ဘဲ ပြောပြချင်ပါတယ် ။။။
ဆဋ္ဌမ မေးခွန်း-------။။။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် အပါအ၀င် ကျန်တဲ့သူတွေကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီလား -
ကျနော်တို့ ဆီကို တိုင်စာရောက်ပါတယ်- ရောက်တော့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် တလလောက်ကပေါ့- အဲဒါကျနော်တို့ က ကျနော်လ၀က-၀န်ကြီး မဖြစ်ခင်ကတည်းက ဟိုအယင်အစဉ်အဆက်ပေါ့လေ-စစ်ဆေးပြီးတော့ စစ်ဆေးတဲ့ပုဂိုလ်တွေကလဲ ဘာကိုဘဲ စစ်ဆေးခိုင်းလဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက် သူ့ ရဲ့အမေအဖေ ဖိုးဖွါးစသည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးဖွါးတာ ဟုတ်သလား မဟုတ်သလား ဆိုတာ စစ်ဆေးပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ပုဒ်မ္မတခု -ဒီအချက်နဲ့ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ဆက်လက်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်- အဲဒီဟာအရ ဒီအချက်နဲ့ကိုက်ညီသလို တင်ထားတဲ့ သဘောဖြစ်သလို ရှိနေတဲ့ အတွက် ခုတော့ တိုင်ထားတဲ့ အတွက် တိုင်စာကို ပြန်စစ်နေပါတယ် - ခုအချိန်ထိ ပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးပါဘူး-တရားဝင်လွှတ်တော် အမတ်တယောက်ကို ကျနော်တို့မှန်ခြင်း - မမှန်ခြင်း အလီဘိုင်နဲ့ ပြရမှာဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စတခုဖြစ်တာကြောင့် ကျနော်တို့ ဘက်က ယောင်ဝါးဝါးနဲ့လုပ်လို့ မရပါဘူး၊ သေသေချာချာ အထောက်အထားနဲ့စစ်ဆေးလျှက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြလိုပါတယ် ။
နောက်ဆက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်တင့်ကို မေးခွန်းမေးတဲ့ အခါ ခုလိုသူက ဖြေကြားပါတယ် ၊
ကျနော်တို့ ကတော့ ဗီဇါထုတ်ပေးတဲ့ အခါမှာ မြန်မာ -Valid-ဖြစ်တဲ့-Passport-ကိုင်ထားလို့ ရှိရင် ကျနော်တို့ က ပေးလို့ ရပါတယ် - -Unless Power -တွေနော်-Black List-ထဲမှာ မပါဘူးဆိုလို့ ရှိရင် ကျနော်ပေးလို့ ရပါတယ် - နောက်တခုကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ-Travel Document-ကိုင်ထားတယ်ဆိုရင် ကျနော်ခုနကပြောသလိုပေါ့- အမည်မဲမပါဘူး လူဟူသမျှ ထုတ်ပေးလို့ ရပါတယ် -အမည်မဲစာရင်းပါရင်လဲ လုံးဝပိတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး- အဲဒီပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌါန တင်ပြပြီး လုပ်တာတွေလဲ ရှိပါတယ် ။
ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ခုလို ကိုရဲမင်းဦး လွှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုခြင်းနဲ့အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးကိစ္စ ဖြေကြားပါတယ် ။
ကိုရဲမင်းဦးကိစ္စကျတော့ ကျနော်တို့ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်များ ဟိုဟာပါ-သက်ဆိုင်ရာတရားစွဲအဖွဲ့ တွေက တရားစွဲတဲ့ အခါမှာ ပြစ်မှုမြောက်တာ မမြောက်တာတွေကို အကြံပေးရတဲ့ရုံးဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည်ထဲရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ တို့ နဲ့ပါတ်သက်တာတွေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားးစီစစ်ရေး ကော်မီတီမှာ ကျနော်လဲပါပါတယ်-ဦးကိုကိုကြီး-ဦးဇါဂနာ NLD ဦးညဏ်ဝင်းတို့ ပါပါတယ်- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစစ်ရေးကော်မီတီ အစည်းအဝေး အခု-၂-ကြိမ်လုပ်ပြီးပါပြီ- ပထမ -၂-သုတ်လွှတ်ပေးစရာရှိပါတယ်- ပြစ်မှုမမြောက်ရင် တင်ပြရင် လွပ်မြောက်သွားမှာပါ- ဒီလူတွေကို ကျနော်ပြန်တဲ့ အခါ ပြန်ကြည့်ပါ့မယ်- ရခိုင်မှာ ဆန္ဒပြလို့ ရုံးတင်တရားစွဲထားတာတွေကို ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ပါ့မယ် -
ပြည်တွင်းထုတ် မည်သည့်သတင်းစာ မည်သည့်ဂျာနယ်များများမှာ မဆို ဖေါ်ပြချင်ရင် ဖေါ်ပြခွင့်ပြုပါသည် - စာမူခ ပေးစရာ လုံးဝမလိုပါ-
Apr 22, 2013 7:05am
အမေရိကားရောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ နယူးယောက် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲကုို မြန်မာများဆန္ဒပြ
by ငရဲ သား (Notes) on Friday, January 11, 2013 at 1:51am
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ရေးသင့်တာကိုရေးပါတယ်..။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူ့လွှမ်းမိုးမှုမှ မရှိတဲ့အတွက်/ခိုင်းတာလုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘင်္ဂလီကိုချည်းပဲ သီးသန့် တစ်လိုင်းသွားရေးစရာမလိုသလို၊ တရုတ်ကိစ္စ၊ ကေအိုင်အေ ကိစ္စ၊ အစရှိသဖြင့် တစ်ခုတည်းကို တလိုင်းသွား ပင်တိုင် မရေးပါ။
တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်ရေးတာတွေက သူများမြင်တဲ့ ရှုထောင့်က ရေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် တမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်..။ တစ်ခါတလေ လေ့လာမှုတွေက အစိုးရနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာကိုသာ ဦးတည်နေတဲ့အတွက် တချို့ဟာတွေကို မိမိအယူအဆနဲ့ လွပ်လပ်စွာရေးပါတယ်...။ အဲဒါကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ကြပါတယ်..။
ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာက ထွက် သည် ဆိုသည့်စကား...
အဲဒီစကားမှာ သင်ခန်းစာရတာက ကိုယ့်တာကိုယ် လုံအောင်ကာဖို့ပါပဲ..။
အခု ဘင်္ဂလီကိစ္စကို သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ရေးနေကြပါတယ်..။ ရှဲကြ လိုက်နေကြပါတယ်..။ debate တွေတောင် လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေကြတယ်.။ အားပေးထောက်ခံပါတယ်..။ ဒါတွေဟာ သမိုင်းမှာ ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေပါပဲ..။
ဒါပေမယ့် immigration အပိုင်းကို ရေးသူနည်းသလို ဘင်္ဂလီတွေ ဘာ့ကြောင့် အဲဒီလောက် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်နေကြတယ်..။ အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးရင် နေရပ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့တယ်လို့ သူတို့က ပြောကြတယ်..။
အဲဒီလို ဘာ့ကြောင့် ပြောကြတာလဲ..။ ပြောရဲ၊ ပြောနိုင်ကြတာလဲ.။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ သူတို့ကို မျိုးချစ်စိတ် အပြည့်အ၀နဲ့ ကန့်ကွက်နေကြတယ်..။ အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေကြတယ်..။ အပြင်မှာ ဆန္ဒတွေပြတယ်...။
သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားကို အစိုးရအပါအ၀င် ကျွန်တော်တို့တတွေ အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်..။ သမိုင်းဆိုင်ရာ debate တွေမှာလည်း လုပ်ဖြစ်ရင် နိုင်ဖို့များပါတယ်..။ ဒေါက်တာအေးချမ်းနဲ့ ဌေးလွင်ဦးဆိုတာ တန်းမတူပါ..။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မေ့နေတဲ့ အချက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်..။ အဲဒါက ပြည်တွင်းက လူဝင်မှုကိစ္စပါ..။
ရခိုင်အရေးအခင်းဖြစ်ပြီးတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကုလမဟာမင်းကြီးကို ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တဲ့ ... ဘင်္ဂလီတွေကို နေရပ်ပြန်ပို့မယ် ဆိုတဲ့ စကား ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ .. လ၀က၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ခိုးဝင်လာသူမရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ ..စကားက အားလုံးကို သံသယဖြစ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
နောက်စကားတစ်ခုက ဘင်္ဂလီ (၅၀၀၀၀၀) ကို white Card ထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်တစ်ခုက ဦးခင်ရီရဲ့ ပြောကြားချက်ပါပဲ..။
အဲဒီမှာ လေ့လာရင်းနဲ့ လင့်တစ်ခုကို သွားတွေ့ပါတယ်...။ UNHCR ရဲ့ မြန်မာပိုင်းဆိုင်ရာ လင့်ပါ
ဆိုတော့က အနောက်ရခိုင်ဒေသမှာ မွတ်စလင် ရှစ်သိန်းကို အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ယာယီနိုင်ငံသားလက်မှတ် ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကြီးပါ..။ UNHCR ကတော့ ဘင်္ဂလီလို့ ဘယ်ရေးပါ့မလဲ..။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ့်မှတ်တမ်းတစ်ခုပါပဲ..။
အဲဒီတော့က ... အရေးအခင်းဖြစ်တယ်..။ ကျွန်တော်တို့က ဒီကောင်တွေ တရားမ၀င်ဘူးဆိုပြီး ဟိုဘက်ကကောင်တွေဆိုပြီး ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်...။ တကယ်ဆို ဟိုဘက်ကို ပြန်ပို့မလို့မရတာ အစိုးရလည်းသိတယ်..။ အဲဒါကြောင့် ဒီကိစ္စကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမကိုင်တွယ်ပဲ အချင်းချင်းရန်ဖြစ်လို့ ပြန်ဖြည်တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်လို နှစ်ဖက်စလုံးကို မျှမျှတတ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်..။ ဟိုဘက်ကော ဒီဘက်ကော အရေးယူခဲ့တယ်..။
ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ... မောင်တောမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တွေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ အနိုင်ရခဲ့တယ်..။ အဲဒီအမတ်တွေရဲ့ လူဝင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေ သုံးပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အထိ ဦးဆောင်ပြီးကန့်ကွက်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ရှိလာခဲ့တယ်..။ ဒါပေမယ့် ယခုအထိ မထူးခြားခဲ့ပါဘူး..။ ရခိုင်အရေးအခင်းဖြစ်ခဲ့စဉ်မှာလည်း ရခိုင်ပါတီတွေက တက်ကြွနေသလောက် လွှတ်တော်သုံးရပ်က မောင်တောအမတ်တွေ ဘယ်လိုမှ ပါဝင်စွက်ဖက်မှုမရှိခဲ့တာ ထူးခြားတာတစ်ခုပါပဲ..။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအဆိုကို ကန့်ကွက်သူပေါ်လာတဲ့အတွက် မတ်တတ်ရပ်ပြီး ဆန္ဒခံယူရာမှာ .. အဆိုတင်သွင်းမှု ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်..။ ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ် NLD ကိုယ်စားလှယ်အပါအ၀င် ၂၈ ဦးသာ မတ်တတ်ရပ်တဲ့အတွက် အယောက် ၄၀ မပြည့်တာကြောင့်ပါ။ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းတောင် မရှိခဲ့ပါ..။
လက်ရှိမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဖြစ်သလို လက်ရှိအချိန်မှာ ပါတီအရေးတွေမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရှိဆုံးက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ဆိုတာတော့ မမေ့စေချင်ပါ..။
အဲဒီကိစ္စတွေကို အပြစ်ပေးအရေးမယူရင် အနာဂတ်မှာ သမိုင်းတရားခံဖြစ်မယ့်သူက ဘယ်သူတွေ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နာကျည်းချက်တွေကို မီးစ ထပ်ထိုးပေးသူတွေက ဘယ်သူတွေဆိုတာ...ကို ဖော်ထုတ်ပါဖို့ပဲ....။
(၂) မောင်တောအရေးအခင်းမှာ တာဝန်ရှိခဲ့သူလို့ ယူဆတဲ့ နစက (ဗမက) အောင်ကြီး အဘယ့်ကြောင့် ပျောက်နေသလဲ..။
(သေချာတာကတော့ ဘင်္ဂလီကိစ္စတွေ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ရေးနေပေမယ့် အစိုးရဖက်က အထုပ်အရှုပ်ကို မရေးရဲသူများနဲ့ သက်ဆိုင်သူများအတွက်ကတော့ ဒီစာတွေဟာ ... မျက်လုံးကို မီးစနဲ့ထိုးသလိုဖြစ်နေမှာပါပဲ၊ )
အဖြူရောင်ကဒ် ကိုင်ထားတဲ့သူတွေ အကုန်လုံး မဲပေးခွင့်ရ
ဒေါက်တာအေးချမ်းအား ...မေးမြန်းချက်ထဲမှ ကောက်နှုတ်ချက် တစ်ခု..။
on Monday, 22 April 2013 23:00
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ပေါင်းတည်မြို့တွင် လူနေအိမ်ရပ်ကွက်များ အပေါ်မှ ဖြတ်သန်း၍ မဟာဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းနေမှုအပေါ် ဒေသခံများမှ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲတွင် ပေါင်းတည်မြို့မှ ဒေသခံအင်အား ၂၀၀ ခန့်မှ နံနက် ၈ ရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်မှ စတင်ကာ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ် ခန့်အထိ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များသို့ စီတန်းလှည့်လည်၍ ဆန္ဒ္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လှည့်လည်ရာ၌ ''၄၄ လမ်းမှ လျှပ်စစ်တာဝါတိုင် ပြောင်းရွှေ့ပေးရေး၊ မူလလမ်းကြောင်းအတိုင်း ထားရှိရေး၊ တည်ဆောက်ရေးမမှန် ဒို့လက်မခံ'' ကြွေးကြော်သံများဖြင့် လည်းကောင်း ''မူလသတ်မှတ်ထားသည့် နေရာမှာ တည်ဆောက်ပါ၊ ၄၄ လမ်းသည် စီမံကိန်းနယ်မြေ မဟုတ်ပါ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တည်ဆောက်ပါ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ လိုက်နာကြ၊ မူလလမ်းကြောင်း အခုရွှေ့ပြောင်း'' စာသားများကို ကိုင်ဆောင်၍ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းမှာ ရွှေတောင်မြို့မှ မှော်ဘီ၊ မြောင်းတကာသို့ သွယ်တန်းမည့် ဗို့အား ၂၃၀၀၀၀ မဟာဓာတ်အားလိုင်း အတွက် တာဝါတိုင်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် ပေါင်းတည်မြို့၊ ဘွဲ့ပင်ကန်ရပ်ကွက်၊ ၄၄ လမ်းရှိ လူနေအိမ်များ အပေါ်သို့ ဖြတ်သန်း၍ သွယ်တန်း ဆောက်လုပ်နေခြင်းအတွက် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ဗို့အား ၂၃၀၀၀၀ ရှိတဲ့ မဟာဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းရာမှာ မူလလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ အုန်းသုံးပင် ကျေးရွာအနီး လယ်ကွင်းထဲကဖြတ်ဖို့ ပထမတိုင်းထွာတဲ့ အဖွဲ့က စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုသွယ်တန်းဖို့ တာဝါတိုင်တွေ လုပ်တဲ့အခါကြတော့ ၄၄ လမ်းက လူနေအိမ်အလုံး ၆၀ အပေါ်က ဖြတ်ပြီး သွယ်တန်းဖို့ လုပ်တယ်။ ဒီလိုလမ်းကြောင်း ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့အနေနဲ့ တာဝါတိုင် ၃ တိုင်ကနေ ၆ တိုင်အထိ သက်သာသွားတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီလို လုပ်လိုက်လို့ သူတို့အနေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသွားပေမယ့် ပြည်သူတွေကို ထည့်မတွက်ဘူး။ နောက်တချက်က ဓာတ်အားလိုင်းအတွက် သစ်ပင်တွေကိုလည်း ခုတ်ပြစ်တာတွေ ရှိလာမယ်။ အကယ်လို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်လာလို့ ရှိရင်လည်း လူနေအိမ်တွေပေါ်မှာက ဗို့အား ၂၃၀၀၀၀ ရှိတဲ့ ဓာတ်ကြိုးကြီး ရှိနေတယ်။ ပြတ်ကျလာလို့ရှိရင် မတွေးရဲစရာပါ။ ပြည်သူတွေက အခုကိုပဲ ရင်ထိတ်နေကြပြီ။ ဒါ့ကြောင့် အခုလို ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲ လုပ်တာပါ '' ဟု ပေါင်းတည်မြို့ခံ ကိုချစ်ကိုမှ ပြောပြခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ တရားဝင် စာတင်ပြီးမှသာ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရကာ ယခုမဟာဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ တရားဝင် စာတင်ခဲ့သော်လည်း ထူးခြားမှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်းအား ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေမည် ဆိုပါက ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲများ ထပ်မံပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သပိတ်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်သူများက ဆိုပါသည်။
မိတ္ထီလာအရေးအခင်း ကဗီဒီယိုတွေကို အခွေထုတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို လိုက်ဖြန့်နေ
ဘာသာရေး အထိကရုန်ဖြစ်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဦးဌေးဝင်း+ဒေါ်လှဝင်း တို့မှ မိတ္ထီလာအရေးအခင်း ကဗီဒီယိုတွေကို အခွေထုတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို လိုက်ဖြန့်နေ တယ်လို့ကြားရပါတယ်.............။
ထို့နောက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ ဒလမြို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပြသနာတွေရှာနေပါတယ်.......
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ ပူပေါင်ပြီးတော့ ထို့ကဲ့သို့ ဘာသာရေး အဓိကရုန်ဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်နေမှုများကို ဖော်ထုတ်ကြပါ..
ပြဿနာတစုံတရာများဖြစ်လာပါက ဥပဒေဘောင်အတွက်းမှ ဖြေရှင်းကြပါ
မူဆလင်ကုလားတွေက ပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင် ဇာတ်လမ်းတွေစနေတယ်
မြန်မာတွေက သွေးဆူလွယ်တာသိတော့ ပြဿနာကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လိုက်စ
ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ပွားပါက သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်းကြားကြပါ မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်မဖြေရှင်းကြပါနဲ့..
မိမိတို့ ဆန္ဒအလျောက်ဖြေရှင်းပါက မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက နောက်ကြောင်ပြန်လှည့်ခြင်း
တယ်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကပ်လိုက်ရင် မိအေးနှစ်ခါနာရပါလိမ့်မယ်...။
D Nyein Lynn's photo.
ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျဆုံးခြင်း (၇၄) နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင် သဝဏ်လွှာဖတ်ကြားနေသော ကိုဗညားနွေဦး
Human Rights Watch ရဲ့ အစီရင်ခံစာလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိ
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဆရာတော်ဦးသောဘိတအား သတ်ဖြတ်သည်ဟုယူဆ ရသောတရားခံများကို ဒီကနေ့ရုံးတင်စစ်ဆေး
Thet Myo Htway's photo.
-မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဆရာတော်ဦးသောဘိတအား သတ်ဖြတ်သည်ဟုယူဆ
ရာကြီး/၁၆/၂၀၁၃ ဖြင့်စွဲဆိုထားပြီး တရားလိုအဖြစ်အမှတ်(၂)ရဲစခန်းမှ
ရဲအုပ်မြင့်သန်း စွဲဆိုပြီး တရားခံ(ယူဆရသူ)အဖြစ် မျိုးညွန့်ပါ(၇)ဦး၊တရား
ခံပြေး မျိုးဝင်း(မျိုးညွန့်ညီ)ပါ(၄)ဦး ဖြစ်ပါတယ်။တရားခံများဘက်မှမန္တလေး၊
(ဓါတ်ပုံမှာ -ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင်ရှိစဉ်က မျိုးညွန့်ပုံဖြစ်သည်)
ဆူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုဒ်မ၅၀၅နဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ) အဖွဲ့ဝင် ကိုရဲမင်းဦးကို ဒီနေ့မှာ ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ ပြည်သူတွေကို ဆူပူအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတာပါ။ ဒီနေ့ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုရဲမင်းဦးရဲ့ရှေ့နေ ဦးကျော်ဟိုးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"အများပြည်သူကို ဆူပူအောင်လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုရင် ဘယ်ကိစ္စကို ရည်ညွှန်းပြီးတော့ လှုံ့ဆော်တာလဲ၊ ဘယ်လိုစကားလုံးသုံးပြီးတော့ လှုံ့ဆော်တာလဲ၊ ဘာမှရေရေရာရာ တိတိကျကျ မဖြေနိုင်ဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်က ဘာဖြစ်လို့ အဲတုန်းကမစွဲပဲနဲ့ ခုကျမှစွဲသလဲ၊ ဘာအကြောင်းရှိလို့လဲ မေးတော့လည်း အကြောင်းမပြနိုင်ဘူး၊ ဟိုဘက်က သက်သေတွေကလည်း ရဲအရာရှိတွေ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှူးက အရာရှိပေါ့ ဒါတွေပဲပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် စွဲတဲ့အမှုက ခိုင်လှုံမှမရှိဘူးပေါ့ဗျာ"
ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့မှာလည်း သာကေတတရားရုံးက ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ (၁၅၃) လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး ဆူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ ကိုရဲမင်းဦးကို ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုရဲမင်းဦးဟာ အခုလက်ရှိ အင်းစိန်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး ကျောက်တံတားမြို့နယ် အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ မနက်ဖြန် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆက်လက်စစ်ဆေးခံရဖို့ရှိပါတယ်။
PRစနစ်ကို အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ တချို့ကကန့်ကွက်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေဟာ လာမယ့်၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ အကြိုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို လာမယ့် ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ် လို့ သိရပါတယ်။
လာမယ့် ဆွေးနွေးပွဲဟာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ပြည်သူတွေ နားလည်အောင် ချပြဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆီကနေ အကြံဥာဏ်တောင်းခံတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ် လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီလဆန်းပိုင်းကလည်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၀ လောက်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အတွက် လာမယ့် ဆွေးနွေးပွဲဟာ ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ PR ခေါ် အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ စနစ်တခုကို အစပျိုးနိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ၊အဲဒီ အဆိုကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၅၀ ကျော်ထဲက နိုင်ငံရေးပါတီ၂၀ လောက်က လက်ခံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ တချို့က အဲဒီစနစ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြ ကြ ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးကတော့ လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဲဒီ PR စနစ် ကျင့်သုံးသင့် မသင့်ဆိုတဲ့ အဆိုကို ဇွန်လမှာ ပြန်လည် ကျင်းပမယ့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြပြီး လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူဆီလို ယိုဒိုယိုနိုဟာ မြန်မာအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၃ နိုင်ငံကို တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီး လည်ပတ်ဖို့ ဒီကနေ့ထွက်ခွာလာပြီး ဧပြီလ ၂၃ ရက် မနက်ဖြန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာကျင်းပမယ့်အင်ဒိုနီးရှားစင်္ကာပူ ခေါင်းဆောင်များ နှစ်ပတ်လည် ဆွေးနွေးပွဲကနေတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတက ဒီကနေ့ ကွာလာလာမ်ပူ မြို့တော်ကနေ မထွက်ခွာခင် သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကို ဆက်လက်ခရီးဆက်မှာဖြစ်ပြီး ၂၂ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံကို တက်ရောက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့ အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည်နေသလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်လုပ်ငန်းစဉ် မှန်ကန်ချောမွေ့ရေးအတွက် အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့ အကူအညီပေးသွားမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marty Natalegawa နဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့လည်းပါရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရိုးသားတဲ့ စာရင်းစစ်ချုပ်ကြီး ကို လက်တွဲဖြုတ် လိုက် ကြတယ်
၀န်ကြီးဌာန (၁၅) ခုမှာ အဂတိလိုက်စားမှု ၊ အလွဲသုံးစားမှု တွေ အထွဠ် အထိပ် ရောက်ပြီး ငွေကြေးကွာဟမှု ကျပ်သန်းပေါင်း သောင်းချီပြီး
အကြီးမားဆုံး ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင်လို (လာဘ်ထိုးပြီး ညှိလို့ မရတဲ့) စာရင်းစစ်ချုပ်လို လူမျိုး က ၀င်စစ်မယ်ဆိုရင် လင်ခရူဇာစီးနေတဲ့ ဘဘသူခိုးတွေ “ဂွိ” ဖို့ဘဲ ရှိတယ် ..
ရှုပ်ထွေးပြီး လျှို့ဝှက် နက်နဲ တဲ့ “စောရ သိုင်းလောကသားတွေ ” က ..
“မိုးပေါ်သို့ ဂါဂါလုပ်” ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး သိုင်းကွက် ကို သုံး လိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့ ..
အားလုံး အေးဆေးဖြစ်သွား ပါတော့တယ် ..
လင်ခရူဇာပေါ်က သူခိုးကြီး တွေ က
ရိုးသားတဲ့ စာရင်းစစ်ချုပ်ကြီး ကို
လက်တွဲဖြုတ် လိုက် ကြတယ် ..
ဘီးလင်း က ချစ်ဘီယာဆိုင်နေရာ မှာ ..
အငြိမ်းစား စာရင်းစစ်ချုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင် ဦးစီး တဲ့
အောင်ပြည့်စုံ ဆိုတဲ့ ထမင်းဆိုင် ပေါ်လာပါတော့တယ် ။
ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ (၈) နှစ်ကျော် ကတည်းက ..
ကျနော် ခရီး သွားတိုင်း .. ဘီးလင်း ရောက်ရင်
ခဏနားနေကျ ၊ဗိုက်ဖြည့်နေကျ ၊ ဘီယာသောက်နေကျ ဆိုင် တစ်ဆိုင် ။
(ဒီ ဆိုင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင် ရဲ့ ဆိုင်ဆိုတာ ကိုတော့ အဲဒီကတည်း က သိထားပါတယ်)
ပြီးခဲတဲ့ နှစ်တွေမှာတော့ ..
ဆိုင်အပြင်အဆင်တွေ ဆိုင်နာမည်တွေ ပြောင်းသွားတာကိုတော့ သတိ ထားမိတယ် ။
နောက်ပိုင်းတော့ အောင်ပြည့်စုံ ထမင်းဆိုင် ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ ဖြစ်နေပြီ ။
အဲဒီဆိုင်က ထမင်းပေါင်း ကောင်းတော့ လည်း ၀င်စား ဖြစ်နေပါသေးတယ် ။
ဧပြီ ၁၉ ရက် နေ့ မှာရန်ကုန်ပြန်လာတော့ .
ဘီးလင်း က အောင်ပြည့်စုံ ထမင်းဆိုင်မှာ ခဏနားဖြစ်တယ် ။
အအေးဘူး တွေမှာသောက်တော့ ..
ရေခဲသေတ္တာထဲ က အအေးဘူးတွေ ကို ကိုယ်တိုင်ယူပေးနေတဲ့
စစ်စွပ်ကျယ် လက်ပြတ် နဲ့ လူကို မြင်ဘူးသလိုရှိလို့ သတိထားမိတယ် ..
အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်တွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာမို့
ဆိုင် က ၀န်ထမ်း တစ်ယောက်ဘဲ လို့ ထင်လိုက်တယ် ။
သေချာကြည့်မှ ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင်ရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲ က ပုံနဲ့ တူနေတာမို့
ဖုန်းပြောရင်း ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်လိုက်ပါတယ် ..
အပေါ့သွားရင်း Toilet က ၀န်ထမ်းကို မေးကြည့်တော့ မှ
အအေးဘူးတွေ ထုတ်ပေးတဲ့ သူဟာ ..
ဗိုလ်ချုပ် လွန်းမောင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေ မှန်း သိရတော့တယ် ။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ..
ပိုင်ဆိုင်မှုမတင်ပြရဲ တဲ့ လွတ်တော်ထဲ က သူခိုးတွေ ၊
လင်ခရူဇာစီးနေတဲ့ ရာထူးကြီးကြီး သူခိုးတွေ နဲ့
အတူတူ နေလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့/ စာရင်းစစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင် ရဲ့ ရိုးဂုဏ် ကိုတော့
(သိန်းဝင်း - ကော့ကရိတ်)
မဟာကြောင်တို့ စတုတ္တမဏ္ဍိုင် ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကို ၀ိုင်းထောက်ပြကြတယ်။ ပြင်ပ ဂျာနယ်လစ်တွေ စည်းကမ်းရှိဖို့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ ထောက်ပြခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အစိုးရရဲ့ သတင်းစာလို့ ဆိုရမဲ့ သတင်းစာဖြစ်တဲ့ မြန်မာအလင်း သတင်းစာကိုယ်တိုင်က ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်နေမှတော့ တခြားဂျာနယ်တွေ စည်းကမ်းရှိဖို့ စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ပီသဖို့ မဟာကြောင်တို့ ဘယ်လို ထောက်ပြရမလဲ။
အခု မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ဖြတ်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။ အသက်အရွယ် မပြည့်သေးတဲ့ (အသက် ၁၆နှစ်အောက်) မိန်းခလေး အဓမ္မကျင့်ခံရတာကို နာမည်အရင်းတွေ ဖော်ပြတဲ့အပြင် လိပ်စာတွေ အတိအကျတောင် ပြောပြလိုက်သေးရဲ့။
အဲဒီကလေးမ နောင် ကြီးလာရင် အရပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမျက်နှာပြမလဲ။ လူတောထဲ ဘယ်လိုတိုးဝင်ရမလဲ၊ အစွဲအလန်းကြိး အယူသီးတဲ့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှူ လောကထဲမှာ ကလေးမလေး ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာ အရှည်မတွေးပဲ.... သတင်းစာ ဆရာတို့ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး နာမည်တွေ လိပ်စာတွေ ဖော်ပြနေလေရဲ့....
အို.. အရပ်ကတို့ ဒုဝန်ကြီးရယ်.. ဟော်လီဒေး အနားယူနေရာက လာကြည့်လှဲ့ပါဦး။ ဝန်ကြီးရဲ့ သတင်းစာ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်နေတာလေးတွေ လာပြီး ဆုံးမလိုက်ပါအုန်းဗျ.....
Tsarnaev ညီအစ်ကို Boston အပြင် အခြားတိုက်ခိုက်မှုတေ...
မိတ္ထီလာအရေးအခင်း ကဗီဒီယိုတွေကို အခွေထုတ်ပြီး အစ္စလာ...
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဆရာတော်ဦးသောဘိတအား သတ်ဖြတ်သည်ဟုယ...
PRစနစ်ကို အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ တိ...
ရိုးသားတဲ့ စာရင်းစစ်ချုပ်ကြီး ကို လက်တွဲဖြုတ် လိုက...